Seismic: AmaXwebhu okuThengisa amaDynamic kunye neeNtetho | Martech Zone
Sifumene ukuqondwa namhlanje xa Martech Zone wabizwa a Owona mthombo uphezulu wolwazi ngokuvumela ukuthengisa amacebo kunye netekhnoloji evela kwiSeismic. Kunyaka ophelileyo, sibonile ukungaqiniseki okumangalisayo kwesi sithuba siphucula ukuthengisa kunye nokulungelelanisa ukuthengisa ngcono kunangaphambili.
Indawo eyasicebisayo-ngasemva Forrester, lesforce kwaye LinkedIn -Yinyikima. I-Seismic yakhe iqonga lolawulo lomxholo weshishini olwenza unxibelelwano phakathi kwamaxwebhu akho kunye nemithombo yexesha lokwenyani yolwazi njengeSharePoint kunye neNtengiso, ukuqinisekisa ukuba wonke umntu kwiqela lakho lokuthengisa unento ayifunayo, xa eyifuna.
Izixhobo zokunika amandla ukuthengisa ezinje ngeSeismic zinokuba nefuthe elibonakalayo kwintengiso yakho, kunye nezibonelelo ezinokulinganiswa:
Ummeli wentengiso ebhodini -Khawuleza uqeqeshe ii-reps ezintsha kwaye uqalise imisebenzi yokuthwala inani elipheleleyo.
Ukusebenza kwexesha Umyinge ophakathi usebenzisa kuphela iipesenti ezingama-35 zexesha labo bethengisa… ngoku banokuchitha ixesha elininzi bethengisa.
Ukuqhubeka nemfundo - qinisekisa ukuba abaphenduli bakho banolwazi malunga neemveliso ezintsha kunye nemiyalezo yophawu.
Ulwazi loMthengi -Dibanisa nesoftware yeCRM ukubonelela abameli ngengqiqo ebalulekileyo kuyo nayiphi na iakhawunti yabathengi.
Ukukhawulezisa umjikelo -Ufinyeze umjikelo wentengiso, onokuthi uvele ukusuka kwintengiso ezenzekelayo ukuya kuguqula ixesha kwizivumelwano.
Ukuhanjiswa komxholo -I-lynchpin yokunika amandla ukuthengisa, ukubanakho ukuhambisa izinto ezifanelekileyo zokuthengisa ngexesha elifanelekileyo kuso nasiphi na isixhobo ukuqinisekisa ukuba amava omntu ngamnye ayenzeka ngendlela ephindaphindayo.
Amashishini atyale imali ekuthengiseni izixhobo zokusebenza kunye nezinye izixhobo ukukhawulezisa umjikelo wokuthengisa wabona a Ukuphuculwa kweepesenti ezingama-51 kumanqanaba okuguqula ekhokelayo, ngokweqela lophando iAberdeen. Malunga Iipesenti ezingama-54 zibone ukonyuka konyaka-nangaphezulu-kwintengiso yeentengiso zentlanganiso.
tags: phila docUqeqesho lweNtengisoukukhwelaumxholo wentengisoamaxwebhu entengisoamaxwebhu okuthengisaUkunika amandla ukuthengisaiintetho zentengisoummeli zintengisoUmntu omele intengisoukuthengisainyikimaisabelo
Iindlela ezi-5 ezithi iitafile zitshintshe amava okuThengisa